သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: သောကြာကြယ် - ၄
စာရေးသူ--> တပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 12:14 AM
အားငယ်ခြင်းမဲ့သော၊ မနာလိုမှုမဲ့သော၊ ဆိုင်ပြိုင်မှုမဲ့သော၊ မောဟမဲ့သောမျက်လုံးများ၊ ကမ္ဘာကြီးမှာ ဘာဖြစ်နေလဲ၊ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဘာဖြစ်နေလဲ စသဖြင့် ဘာကိုမျှ မသိသော မျက်လုံးများ၊ သိရန်လဲမလိုသော မျက်လုံးများ၊ ထို..အရောင်မဲ့ မျက်လုံးများနှင့် ထူးမတို့ကို စိုက်ကြည့်နေခဲ့ပါသည်။
အဲဒီ့စာကြောင်းကို ထပ်ခါထပ်ခါ ဖတ်ကြည့်ရင်း အတွေးတစ်ခုစီ ထွက်လာတယ်.
အထူးသဖြင့် ဘာကိုမှမသိသော မျက်လုံးများ၊ သိရန်လည်း မလိုသော မျက်လုံးများ၊ ထို.. အရောင်မဲ့မျက်လုံးများ ဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့.
အချိန်ယူပြီး ဆက်ရေးပါဦး. တစ်ခါတစ်ခါတင်တာ နည်းပေမယ့် ဖတ်ရတာ တကယ်တန်ပါတယ် မလေးရေ.
အဖွင့်ကိုတွေ့တော့ နဲနဲလန့်သွားတယ်။ထူးမများ ပါသွားပြီလားလို့။ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့တော့ ထင်သား။ ထူးမကို တိုင်ပြောမယ်။ လူကြီး မသိအောင် ရေခိုးကူးတယ်။ အိမ့်ရေ...သောကြာကြယ်က episode ဘယ်နှစ်ခုလဲဟင်။ ပြောပြမလား 8-)
awareness ဖြစ်ခြင်းရဲ့ ကောင်း/မကောင်းမှုကိုစဉ်းစားမိလို့ပါ။ awareness ဖြစ်လာရင်တာနဲ့အမျှ အဲဒီရဲ့ ဆိုးမှုကောင်းမှုတွေကို ခံစားလာတာတွေ၊ အသက်ကြီးသော်လည်း ပတ်ဝန်းကျင် အနေအထားနဲ့ မိမိရဲ့ သိချင်မှု/မသိချင်မူတွေပေါ်မှာ မူတည်လို့ innocence ဆိုတဲ့ အရာဟာ အတိုင်းအတာ တစ်ခုထိ လူတစ်ဦးဦးဆီမှာ ရှိနေတတ်သေးတာကို စဉ်းစားမိလို့ပါ
တစ်နေ့ နည်းနည်းရေးနေတာ…မ။ နောက်ထပ် ၃ - ၄ ခုလောက်တော့ ကျန်ဦးမယ်ထင်တယ်။ plot ချမထားဘူး..မ။ ခံစားချက်တွေနဲ့ အတွေးတချို့ကို စာရွက်ပေါ် ပစ်ပစ်ချနေတာပါ။
သောကြာကြယ် ရဲ့ ဇာတ်အိမ်လေးက တော်တော်ကောင်းတယ်။
တစ်ခု ပဲ သတိထားပါ။ Character တွေရဲ့ လေတွေ တူနေတယ်။
CO ကြီးမိန်း မနဲ့သူလက်အောက်ငယ် သားရဲ့ မိန်းမ ရဲ့ လေ၊
CO ကြီးနဲ့သူလက်အောက်ငယ်သား ရဲ့ လေ၊
နောက် ထူးမတို့ ရွယ်တူတွေ ရဲ့ လေ တွေ ဟာ တော်တော်ဆင်နေတယ်။
တစ်ထပ်တည်းလို့ တောင်ပြောလို့ ရနေတယ်။
ဝတ္ထုဟာ အသံပါတယ် ဆိုတာ ဆရာမ သိပြီးသား နေပါလိမ့်မယ်။
ဆရာမ ဝတ္ထုလေး လာဖတ်တိုင်း အောက်က လိုက်လိုက်ရေး နေတဲ့ ဝေဖန်ရေး ဆရာလား၊စာရေးဆရာလား မသိတဲ့
ရန်အောင် ဆိုတဲ့ နာမည်ပိုင်ရှင်ရဲ့ အလွံအကျွံမြောက်ပင့် နေတဲ့ အလုံးတွေးကြား ထဲမှာ
တကယ် ကောင်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေး ဇာတ်ကောင်အကိုင်အတွယ် ကြောင့်ပေါ့ သွားမဆိုးလို့ပါ၊
ကျုပ်ကိုယ်တိုင်လဲ ဝေဖန်မိသွား ပြီး ထင်ပါတယ်။
ချစ်စုဘလော့က public ဖြစ်သွားတာလား ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်
ခုလိုဝေဖန်တာကျေးဇူးပါ။ CO ကြီးမိန်း မနဲ့သူလက်အောက်ငယ် သားရဲ့ မိန်းမ ရဲ့ လေ၊
CO ကြီးနဲ့သူလက်အောက်ငယ်သား ရဲ့ လေတွေရောအောင်..
ပထမအပိုဒ်မှာ အသံတွေဖျောက်ထားတာ ထူးမ လိုက်သွားတယ်လို့ စာဖတ်သူတွေ ပထမထင်အောင် ရေးလိုက်တာပါ။
ထူးမတို့ ရွယ်တူတွေရဲ့ လေတွေ တူတယ်ဆိုတာတော့ ဟုတ်တယ်။ ကျေးဇူး။
ကိုရန်အောင်က မြှောက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ သောကြာကြယ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်မခံစားချက်ကို ကျွန်မအဖြစ်တွေကို သိထားသူမို့ ဆက်မရေးပဲ ရပ်ထားမှာစိုးလို့ အားပေးနေရုံ သက်သက်ပါ။
ခုလိုထောက်ပြတာတွေတွက် ကျေးဇူးပါ။ နောင်ရေးမယ့် ၀တ္ထုတွေအတွက် ကျမအတွက် အားပါပဲ။ ဆရာမလို့တော့ မခေါ်ပါနဲ့ရှင်.. ဆရာမ မဟုတ်ပါဘူး။း)
ဆရာမ အနေနဲ့စာဖတ်သူတွေ ကို ဆွဲခေါ်သွားချင်လို့ထည့်လိုက်တဲ့ အသံဆိုပေမဲ့။
Tone,Color တွေ က တူလွန်းနေတဲ့ အချက်ကို ဆိုလိုတာပါ။
ခံစားမှု တစုံတရာကြောင့် တကယ် နာကျင်နေတဲ့ အချိန်မှာ သူဋ္ဌေးဖြစ်ဖြစ် ၊ မြင်းလှည်းသမား
ဖြစ်ဖြစ် အသံကတူတူဖြစ်သွားတာပါ။ ဒေါသသံ၊ နာကျင်သံ၊ နမြောတသ သံလိုမျိုး ဖြစ်သွားတတ်တယ်။
ခုရေးသွားတဲ့ ပုံစံက Tone,Color မပြောင်းဘူး စကားလုံး သက်သက် ပြောင်းသွားတာမျိုးကို ဆိုလိုတာ
တကယ်တော့ အဲလို အခြေအနေမှာ လူတိုင်း အတူတူဖြစ်သွားတာ ပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဆရာမရေးထားတဲ့
လေသံထက် ပိုမာကြောတယ်၊ ပိုပြင်ထန်တယ်၊ ပိုရိုးသားတယ်၊ ပိုနာကျည်းတယ်၊
ခုက သိမ်မွေ့ နေသေးတယ်။ ပလော့တွေမှာ နာမည်မှ မပါ၊ သီးခြား အခေါ်အဝေါ်မှ မပါတာ။
တင်ရေးလို့ ရပါတယ်။ လုပ်ယူစရာမလို ပါဘူး။
ကျနော် Realism တစ်ခု အနေနဲ့ ဖတ်လို့သတိပေးတာပါ။
ရန်အောင် အားပေးတာဟာ ပြဿနာမဟုတ်ပါ။ သူတစ်ယောက်ထဲ မဟုတ်ပဲ တန်ခူး၊ ကေအေဝိုင်
တို့ လဲရေးနေတာပါပဲ။ ဘယ်လိုကောင်းတယ် ဘာကြောင့်ကောင်းတယ် ဆိုတာမျိုးတွေ
ရေးနေတာ ကို ဆိုလိုတာပါ။ ဆရာလုပ်နေတာလား ၊ အချင်းချင်းပင့်နေတာလာ၊ ဆိုတာမျိုး တွေးဆရာဖြစ်လို့ ပါ။ ဒါဟာ သူတေသနကွင်း မဟုတ်တဲ့ အတွက် စာညွန်ရေး
စရာ မလိုပါဘူး။ သောကြာကြယ် ဖတ်ပြီး ကောင်းတယ် ဆိုပြီး စိတ်ထဲဝင်သွားတဲ့ ခံစားမှုအားလုံး
ရန်အောင်ရေး တားတဲ့ ဇွတ်တရွတ်ချီးမြောက်တာတွေ ဖတ်ထားပြီး စိတ်လေလေသွားတယ်။
နောက် ပေါက်ဦးပဲ ဆိုတဲ့ဘန်းစကား အရ ရန်အောင် ဟာ စာပေအသိုင်း အဝိုင်းနဲ့ ထိစပ်ပုံရတယ်။
တကယ်ဆရာကြီး ဆိုလဲ နောက်မှ သေချာ စစ်တမ်းပုံစံမျိုးရေးစေ့ ချင်ပါတယ်။
သေချာလေ့ လာထားတယ် ဆိုရင်ပေါ့ ။
ဒါမှ မဟုတ်ရင်တော့ ပုဆိုးတစ်အုပ် နဲ့ ဒေါင်းဒင်္ဂါး ၁၀ ပြားလောက်ပေးလိုက်ပါ :)
အကြံပေးတာပါ အကုန်ပြီးတာနဲ့ ဘယ်သူမှ ကော့မန့် ရေးခွင့် မပေးပဲ အစအဆုံးတင်ပေး စေချင်ပါတယ်။
အကုန်ပြီးတာနဲ့ ဘယ်သူမှ ကော့မန့် ရေးခွင့် မပေးပဲ အစအဆုံးတင်ပေး စေချင်ပါတယ်.. ကတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးရှင့်…
ဒီဝတ္ထု ပြီးအောင်တောင် ကျွန်မ မနဲရေးနေရတာ။ အခြားစာဖတ်သူတွေ သူတို့ခံစားချက်ရှိသလို ရှိတုန်းချရေးမှ အစစ်အမှန်မြင်ရမှာပေါ့။ အခု စာဖတ်သူရေးသလိုပေါ့။ အသံတွေလျောယှက်မှုကို ဒီစာ ဆုံးမှ သိရတာထက် စောစောသိရတာ ကျွန်မတွက်ကော ဒီစာကို ဖတ်သူတွေပါ အကျိုးရှိသလိုပဲပေါ့။
မလေးရေ ဟိုလို လုပ်ပါလား၊ ဒီလို လုပ်ပါလား။ ငါလဲ မလုပ်တတ်ဘူး၊ ဟီး စတာနော်၊ ဝေဖန်ကြည့်တာ၊ ဘယ်လို ဝေဖန်ရမှန်း မသိလို့၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မလေးရဲ့ သောကြာကြယ်ကို စိတ်ဝင်းတစား စောင့်မျှော်နေပါကြောင်း၊